Mashandisiro aungaita yako iCloud uye Alexa kalendari pane iyo Amazon Echo | IPhone nhau
Mashandisiro aungaita yako iCloud uye Alexa kalendari pane iyo Amazon Echo
Luis Padilla | | Zvidzidzo uye zvinyorwa, dzakawanda
Kupesana neizvo vazhinji vachiri kufunga nekutaura, Iyo nguva iyo iyo ecosystem yeApple yaive bindu rakavharwa umo musina munhu aigona kupinda uye isu vedu vaive nemaApple madhiragi vakaitwa nhapwa yekushandisa chete masevhisi ayo nezvimwe zvinhu, ivo vatove kure kure.. Ichokwadi kuti kune mimwe mikova ichakavharwa, senge kushandiswa kweSpotify nePambaPod yedu, asi mamwe mazhinji akavhurwa uye, semuenzaniso, kushandisa Amazon Echo semushandisi weApple zvinogoneka zvachose.
Mavhiki mashoma apfuura Apple Music yakasvika kumutauri weAmazon, kunyangwe izvozvi muUnited States chete, zvinoratidza kuti makambani ese ari maviri anoda kutanga kubatana uko vese vanogona kubatsirwa. Uye kune mamwe akawanda mabasa atovepo, senge kubatanidzwa kweApple makarenda mu Alexa neAmazon smart speaker. Kana iwe uri mushandisi weICloud uye uchida kukwanisa kubata zvako zvakagadzwa kubva kuAmazon Echo, izvi zvinokufarira.
1 Gadzira password password
2 Gadzira iCloud makarenda mu Alexa
Gadzira password password
Yange iri nguva yakareba kana iwe uchida kushandisa Apple sevhisi mune yechitatu-bato app iwe unofanirwa kutanga wagadzira password password. Icho chiyero chekuchengetedza kudzivirira kusaisa pasiwedhi yeakaundi yako yeICloud mune yechitatu-bato maapplication, uye inosanganisira kugadzira password nyowani iyo ichave iyo iwe yaunoshandisa kune iyo chaiyo application. Naizvozvo chichava chinhu chekutanga chatinoita mune ino dzidziso. Tinya pane Iyi link uye uwane yako Apple account.
Muchikamu Chengetedzo, tsvaga iyo sarudzo «Gadzira password» mukati me "Anoshanda Mapasipoti". Izvo zviri nyore kwazvo uye iwe unofanirwa chete kupa iro password kuti zita (Alexa, semuenzaniso) uye nyora pasiwedhi yavanokupa kuti uiise gare gare mune iyo Alexa app.
Gadzira iCloud makarenda mu Alexa
Iye zvino tinofanirwa kuvhura iyo Alexa application pane yedu iPhone, tinya pane icon mukona yepamusoro kuruboshwe uye uwane iyo "Zvirongwa" menyu. Kufambisa pasi zvishoma tinogona kuwana sarudzo "Karenda" uye mukati mayo makarenda akasiyana atinogona kuwedzera ku Alexa. Sezvaunoenda, Apple's iCloud kalendari iri pakati peanowirirana, uye ndipo patinowana. Isu tinotevera matanho ekumisikidza tichirangarira izvo Kana ikatibvunza isu password, isu hatifanire kushandisa iyo iCloud password, asi iyo yatakatora kare se "Chinyorwa Chekushandisa".
Kana tangogadzirirwa tinokwanisa kusarudza khalendari iyo Alexa ichazoshandisa nekumisikidza pakuwedzera zviitiko, mune yangu "Yemunhu" mukati mematarenda akasiyana andinayo muICloud. Kubva panguva ino hatizokwanisi chete kuziva zviitiko zvipi zvatiinazvo nekukumbira Alexa, asi zvakare wedzera zviitiko zvitsva uchishandisa mubatsiri weAmazon. Mimwe mirairo yatinogona kushandisa, semuenzaniso, ndeiyi inotevera:
Alexa, wedzera chiitiko kukerenda yangu
Alexa, wedzera mubati wevhudzi musi wa5 na7 manheru.
Alexa, zviitiko zvipi zvandinazvo nhasi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Mashandisiro aungaita yako iCloud uye Alexa kalendari pane iyo Amazon Echo
Apple inojekesa shanduko kune metadata zvinodiwa zvepodcast
EaseUS MobiSaver Mahara: Iyo chirongwa chekudzosera yakadzimwa data kubva ku iPhone